Lehiben'ny fizahan-tany any Vancouver teo aloha hiteny amin'ny valan-dresaka momba ny fahitana any Vanuatu
Home » Travel Associations News » Lehiben'ny fizahan-tany any Vancouver teo aloha hiteny amin'ny valan-dresaka momba ny fahitana any Vanuatu
Ny fanokanana Konferansa momba ny fizahantany any Pasifika (PTIC), izay atao any Port Vila, Vanuatu amin'ny Alarobia 25 Oktobra, dia kasaina hamaha ireo olana lehibe sy fanamby atrehin'ireo orinasam-pizahan-tany amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny faritra.
Drafitra sy tanterahan'ny Fikambanan'ny dia lavitra any Azia Pasifika (PATA) miaraka amin'ny South Pacific Tourism Organization (SPTO) ary ny Birao fizahan-tany Vanuatu (VTO) nanokatra ny fihaonambe tamina lahateny fototra momba ny 'fisainana katedraly' avy amin'i Rick Antonson, mpanoratra sady CEO taloha an'ny Vancouver teo aloha.
Ny fandaharan-kevitry ny kaonferansa, mizara fizarana dimy, dia misy ihany koa fampisehoana avy amin'ireo manam-pahaizana momba ny fizahantany iraisam-pirenena sy ireo mpitarika eritreritra toa an-dry Dr Mathew McDougal (CEO - Digital Jungle); Sarah Mathews (Lehiben'ny PATA ary lehiben'ny APAC Marketing Destination ao amin'ny TripAdvisor); Stewart Moore (CEO - EarthCheck); sy Carolyn Childs (Tale - MyTravelResearch.com) iza no hanao ny famelabelarany amin'ny alàlan'ny horonantsary. Ny kaonferansa dia tohanan'ny BBC World News miaraka amin'ireo dinika roa tonta anaovan'ny mpanao gazety iraisam-pirenena Phil Mercer.
Ny talem-paritry ny PATA - Pacific Chris Flynn, ny hery manetsika ny fikaonandoham-pirenena, dia nilaza fa: “Manantena izahay handray ireo minisitry ny fizahantany ao amin'ny faritra amin'izay heverinay fa hetsika ho an'ny Vanuatu sy ny Fikambanana fizahan-tany any Pasifika atsimo. Io ilay fahitana mahavariana an'ireo matihanina amin'ny indostrian'ny fizahantany miasa any Pasifika efa ho 70 taona lasa izay izay nanjary niforona ny PATA. Ity fihaonambe voalohany ity dia taratry ny fahavononantsika hanohana hatrany ny sehatry ny fizahan-tany any amin'ny faritra miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka isam-paritra. ”
Ireo solontena dia samy handre ny fandraisana tsara avy amin'ny filoha SPTO Sonja Hunter sy ny filohan'ny PATA Sarah Matthews, arahin'ny lahateny fanokafana avy amin'ny Hon. Joe Yhakowaie Natuman, ny praiminisitra lefitra mpisolo toerana an'i Vanuatu ary minisitry ny fizahantany.
Ny lahateny famaranana dia hataon'ny Dr. Mario Hardy, tale jeneralin'ny PATA. Ny kabary famaranana dia homen'ny Christopher Cocker, CEO an'ny SPTO.
Lufthansa Group dia mandefa foto-kevitra hametrahana Alitalia voaorina indray